Satin Ziso Mask vatengesi uye fekitori - China Satin Ziso Mask Vagadziri
Poly satin yekurara mask
Chiedza muvengi wehope, saka uyu mushandi anoshanda anobatsira iwe kuwana rima rakazara chero kwaunofunga zzzz. Chifukidzo chedu chakagadzirwa nesoft satin .Uye yakapetwa sekamusoro kehunhu hwako hwekunaka husiku - hazvo zvinongova zvisina mhosva. Super yakapfava satin ziso mask ine yakasarudzika mameseji, ichaita yakanaka kwazvo yakasarudzika chipo kwaari! Saizi: Saizi imwe inokwana zvakanyanya (chinogadziriswa tambo) .Custom size gamuchira. Kuyera: Kukura Kwevakuru - 20cm x 10cm, Kukura kwevana - 17cm x 8cm • Chinyorwa: Satin • Mu ...
Tsika yekudhinda dhizaini ziso mask
Mufashoni dhizaini ziso
Ruvara rwebhuruu ziso mask
Ruvara rwakasimba rwekurara mask
Poly satin ziso mask
Ruvara rwepingi ziso mask